Midawga Afrika Oo Guddi Xaqiiqo-Raadin Ah Oo Uu U Saaray Muranka Jasiirradda Ay Ku Muransan Yihiin Eritrea Iyo Djibouti | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Midawga Afrika Oo Guddi Xaqiiqo-Raadin Ah Oo Uu U Saaray Muranka Jasiirradda Ay Ku Muransan Yihiin Eritrea Iyo Djibouti
June 21, 2017 - Written by Mustafe Faro
Golaha Ammaanka Oo Darsay Xiisadda soo Cusboonnaatay Ee Ka Taagan Xadka Labada Dal Iyo Habka Xalka Loo Waajahayo
Addis Ababa(Hubaal):- Ururka Midawga Afrika, ayaa Guddi-xaqiiqo raadis ah oo uu sheegay inuu magacaabay u diraya Xadka u dhaxeeya Jabuuti iyo Eritrea oo ay xiisad dagaal ka dhici karto, ka dib markii ay Ciidammo Dawladda Qadar ka socday oo Nabad-ilaalin u joogay halkaas siddeedii sano ee u dambaysay ay toddobaadkii hore kala baxday, markii ay labada dawladood la safteen Xulufada Sucuudigu hogggaamiyo ee xidhiidha u jaray Qadar.
Xiisadda waxaa kiciyey markii Qatar ay ciidankeeda ka qaadatay xudduudda labada waddan u dhexeeya, halkaasoo ay nabad ilaaliyayaasheedu joogeen tan iyo 2010, ayagoo qayb ka ahaa dadaal la doonayey in lagu xalliyo muranka dhulka buuraleyda ah ee Jasiiradda Dumeira, kaasoo ay labada dalba sheegtaan. Jasiiradda Dumeira ayaa ku taalla meel u dhaxaysa labada dal oo koofurta kaga taalla badda cas, waxayna aad ugu dhow dahay marin biyoodka babul mandab oo muhiim u ah ganacsiga dunida. Ciidammada labada waddan ayaa isaga hor yimid xudduudda 2008, waxayna markaa ka dib labada dal ogolaadeen dhex dhexaadin ay Qatar ku yaboohday, iyo sidoo kale ciidammo nabadda ilaaliya oo ay keento, walow cilaaqaadka laba geesoodka ah uu ahaa mid aan fiicnayn.
Ka bixitaanka nabad ilaaliyeyaasha Qatar ayaa u muuqda inuu xiriir la leeyahay khilaafka dalkaas kala dhaxeeya dalalka ay jaarka yihiin ee khaliijka. 16kii bishan ayey Jabuuti ku eedeysay Eritrea in askarteeda ay soo dhoobtay dhulka lagu muransan yahay, ka dib markii ay ka bexeen nabad ilaaliyeyaasha Qatar, talaabadaasoo ay Dooxa xaqiijisay laba maalmood ka hor. Wasiirka Arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf aya ku eedeeyey Eritrea inay soo gashay dhulka lagu muransan yahay ee xudduudda, wuxuuna sheegay in dalkiisu uu doonayo xal nabdoon, laakinse uu diyaar u yahay dagaal haddii la huri waayo. Labada dalba, waa Jabuuti iyo Eritrea, waxay la safteen Sacuudiga, ayagoo ka hiilliyey Qatar. Hadal qoraal ah oo 17kii bishan laga soo saaray wasaaradda warfaafinta ee Eritrea ayaan si toos ah loogu sheegin eedeynta Jabuuti, waxayse taa beddelkeeda ku sheegtay in ay la dhakafaartay degdegta ay Qatar halkaa kaga baxday, oo aysan doonayn inay hadal intaa ka sii badan ka sii tiraahdo. Itoobiya oo ah dalka ilaa iminka ugu tunka weyn geeska Afrika, soohdimana la leh labada dal ee Eriotrea iyo Jabuuti waxay tagersan tahay tallaabada Midowga Afrika uu ergo xaqiiqo raadis ugu dirayo, waxayna QM ka codsatay in hindisahaas la taageero. Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Itoobiya waxay 18 Juun ugu baaqday labada dal inay ka dhowrsadaan in xiisaddu cirka isku sii shareerto, taa beddelkeedana waxay ku talisay in khilaafaadka lagu xaliyo qaabab nabdoon. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in Jabuuti iyo Eritrea ay muranka u dhaxeeya ee xadka ku dhameeyaan si nabad ah. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa darsay warbixinta xiisadda ka taagan xadka labada dal, markaa ka dibna, wuxuu ku baaqay in xalka si nabad ah lagu gaaro, iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah; sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP.